Dura Europos, sunagoggii ugu da'da weynaa iyo kaniisadda adduunka | Wararka Safarka
Safarka Socdaalka | | General, Safarka Aasiya
Waayahay, tani maahan waqti ku habboon in la booqasho Suuriya Laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee ay wax u degaan ayaa laga yaabaa inaad qorsheyn karto safar. Miyay taasi tahay dhulka Suuriya waa dhul millenimo ah oo halkan, oo u dhow tuulada Salhiyé, waad heli doontaa Dura Europos aaway kaniisadda ugu da'da weyn adduunka. Magaalada deyrka leh, oo laga dhisay buur dhererkeedu yahay 90-mitir oo ku taal daanta Euphrates, waxaa la dhisay 303 BC mana ahayn dhaxalkii Alexander the Great ee ka talinayay marinka wabiga iyo qayb ka mid ah shabakad gumaysi milateri ah.
Markii dambe waxaa loo dhisay magaalo Hellenic ah, qarnigii 165aad ee miilaadiga, illaa ay ka noqotay magaalo caalami ah oo Masiixiyiinta iyo Yuhuuddu ku wada noolaayeen. Markii ay qabsadeen Roomaanku 200 AD waxay ku dhowaad 20 ahayd in la dhisay sunagoggii hore iyo kaniisaddii. Nus qarni ka dib magaaladii waa laga tegey ciiddiina way qarisay weligeedba. Waxay ahaayeen ciidamadii Ingiriiska ee ka helay bartamihii kacaankii Carabta waxyar kadib Dagaalkii Koowaad ee Adduunka. 20-meeyadii waxaa la wargaliyay aqoonyahan qadiimiga ah oo Mareykan ah qoditaanadi uguhoreeyayna, Mareykan iyo Faransiis, wuxuu dhacay inta udhaxeysa 30s ilaa XNUMXs. Burburku, in kasta oo aanu qurux badnayn, haddana waa kuwo qadiim ah oo muhiim ah oo neefta kaa qaadaya. Qoraallada ayaa laga helay luuqado badan oo qadiim ah, waxaa jira dhismayaal diimeed iyo seddex guri oo saqaf ah oo aakhirkii loo beddelay, midna sunagog, kan kalena kaniisad. Labaduba waa kuwa ugu da'da weyn adduunka.
Sunagoggu wuxuu ku taariikheysnaa sida sanadka 244 iyo muraayadaha gudaha ayaa horay loogu wareejiyay Matxafka Qaranka ee Dimishiq. Kaniisadda waa lakala diray oo dib looga dhisay jaamacada Yale 30s oo inbadan oo kamida kumajiro Dura Europos. Sawiradu waxay bilaabmayaan inta udhaxeysa 232 iyo 256 waana kudhowaad farshaxankii ugu horeeyay ee masiixi ah. Dabcan, sidoo kale waxaa jira macbadyo jaahil ah. Inaad halkaa gaarto ma sahlana maxaa yeelay goobtu waa fog tahay waxayna ku dhowdahay soohdinta Ciraaq, marka waxaad ku imaaneysaa safar. Markii aan qoraalkan qorayay, kama caawin karo laakiin waan ka qoomameynayaa qaddarka ay ku dhacday jawharadan taariikhiga ah. Maxay ku dhacayaan quwadihii gumeystaha hanti badan oo aan iyagu lahayn!
Sawir: via Foornada
Sawirka 2: via Peculiars-ka Counterlight-ka
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Dura Europos, sunagoggii ugu da'da weynaa iyo kaniisadda adduunka